नेकपाको सचिवालय बैठक सक्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड किन शितलनिवास पुगे ? « Kalakhabar
नेकपाको सचिवालय बैठक सक्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड किन शितलनिवास पुगे ?
प्रकाशित मिति : शनिबार, ३ श्रावण २०७७ २२:०३
कलाखबर संवाददाता,३ साउन – काठमाण्डौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक सम्पन्न भएको छ । सवा ३ बजेबाट सुरु भएको बैठक साँढे ७ बजे सम्पन्न भएको हो । चार घण्टाभन्दा बढि चलेको बैठकमा नेताहरुबीच ठोस सहमति भएको छैन् । बैठकपछि पत्रकारहरुलाई जानकारी दिँदै प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सहमतिकै आधारमा समस्याको सम्बोधन गर्ने सहमति भएको बताए ।
नेकपाको सचिवालय बैठक सक्ने बितिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शितलनिवास पुगेका छन् । पार्टीको आन्तरिक समस्या र संकटलाई सहमतिको आधारमा संबोधन र समाधान गर्ने बारेमा गृहकार्य भइरहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जनाएका छन् ।
पार्टी एकताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न नेपाली समाजको आवश्यकता र जनादेश अनुरूप अघि बढ्ने प्रस्ताव तयार गर्ने र छलफल जारी राखेर सहमतिमा निष्कर्षमा पुग्ने छलफल र निर्णय भएको पनि उनले जनाएका छन् । फेरि आईतबार दिउसो ३ स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ ।